“Messi iyo Ronaldo halkaan kama dhalin karaan 80-gool.”. Paulo Dybala oo tilmaamay inuu jilcan yahay horyaalka La Liga – Gool FM
“Messi iyo Ronaldo halkaan kama dhalin karaan 80-gool.”. Paulo Dybala oo tilmaamay inuu jilcan yahay horyaalka La Liga
(Juventus) 01 Maajo 2016. Xiddigaha ugu fiican kubbada cagta adduunka ee waqti xaadirkan ma ay dhaliyeen 80-gool xilli ciyaareedkii haddii ay ka ciyaari lahaayeen horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga waa sida uu qabo wiil yaraha kooxda Juventus Paulo Dybala.
Ronaldo iyo Messi ayaa waqtigooda La Liga si joogta ah u dhalinayay goolal ka badan 50-goool xilli ciyaareed kasta, laakiin Dybala ma aaminsana in sheekadaa ka soconeyso horyaalka uu ka ciyaaaro.
Da’yarka reer Argentina ayaa ka mid ah awooda Juventus ku hogaamisay Scudetto kal ciyaareedkan isagoona dhaliyay 16-gool, wiilasha Massimiliano Allegri ayaa markii shanaad oo xiriir ah ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga.
“Waxaan oranayaa Talyaaniga waxaa ka jira difaac aad u fiican waana nuuc xeelad oo kubbada cagta,” Dybala ayaa sidaa u sheegay Tuttosport.
“Kooxaha yar yar uma ciyaaraan feejignaan la’aan sida ay ka sameeyaan oo kale Spain, inkastoo Atletico Madrid ay badaleyso maskaxdaa. Messi iyo Ronaldo kama ay dhaliyeen 80-90 gool halkan Talyaaniga.
“Laga yaabee inay dhaliyaan 40-gool sida Higuain laakiin ma ahan 80-gool.”.
Dhanka kale Dybala ayaa lala meel dhigaa inuu u ciyaaro sida Messi wuxuuna yiri isagoo ka hadlaya midaa: “Waa wax farxad leh, isbar-bardhiga ima wal wal galinayo, waxay la micno tahay haddii aad si adag u shaqeyso waxaad noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
“Ma garanayo haddii aan noqon doono sida Messi, laakiin himiladeyda waa inaan ku guuleystaa Ballon d’Or.”.
Barcelona oo waayi karta goolhaye Claudio Bravo inta ka harsan xilli ciyaareedka
"Waxaan u qalanay inaan guul ka gaarno Leicester City" - Wayne Rooney